Ubulungu - I-Word Foundation • Yiba ilungu
Abaningi baba ngamalungu eThe Word Foundation ngenxa yothando lwabo ngezincwadi zikaPercival, ithonya elijulile ababa nalo empilweni yabo kanye nesifiso sokusisekela ekufinyeleleni ekufundeni okubanzi. Ngokungafani nezinye izinhlangano, asinayo i-guru, uthisha noma isiphathimandla esengamele. Inhloso nokuzibophezela kwethu ukwazisa abantu bomhlaba wobuciko obukhulu bukaPercival, Ukucabanga Nekusasa, kanye nezinye izincwadi zakhe. Sitholakala ukunikela ngokuholwa okuthile, uma kuceliwe, kepha futhi singabasekeli bokuhlakanipha kokuzibusa — ukufunda ukuthembela nokuzibandakanya negunya lakho elingaphakathi. Izincwadi zePercival zingasebenza njengomhlahlandlela wokusiza ngale nqubo.
Wonke amalungu e-The Word Foundation, kungakhathaliseki ukuthi yiliphi izinga lokusekela oyikhethayo, uzothola umagazini wethu wekota, The Word (I-Sample Magazine), nesaphulelo se-40% ezincwadini ze-Percival.
ILizwi Foundation isekela ukutadisha izincwadi zikaPercival. Ngomagazini wethu wekota, iZwi, sakhe isikhala sokwazisa abafundi bethu ngezindlela ezahlukahlukene zokufunda. Lapho umuntu eba yilungu leThe Word Foundation, lolu lwazi lutholakala kumagazini wethu:
• Uhla lwamalungu ethu anesithakazelo sokutadisha nabanye.
• Usizo oluvela kwi-Word Foundation lwabo bafuna ukuya noma ukuhlela amaqembu okutadisha emiphakathini yabo.
Ukuphila okulodwa emhlabeni kuyingxenye yochungechunge, njengesigaba esisodwa encwadini, njengesinyathelo esisodwa emlandweni noma njengosuku olulodwa empilweni. Umqondo wengozi kanye nokuphila okulodwa emhlabeni kukhona amaphutha amabili avelele abantu. HW Percival